United Arab Emirates University - Study dibadda ee Imaaraadka
gaabinta : UAEU
aasaasay : 1976
Ha iloobin in aad wada hadlaan United Arab Emirates University
Qor at United Arab Emirates University
Ku soo dhawow United Arab Emirates Jaamacadda (UAEU) – Jaamacada ugu horrayn waxa weeyi qaran oo buuxa oo dalka Imaaraadka Carabta. aasaasay sannadkii 1976 by gaystay Sheekh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, UAEU waxey rajeyneysaa in ay noqdaan dhamaystiran ah, cilmi-degdeg ah jaamacadda iyo hadda iska diiwaangeliyo qiyaastii 14,000 Imaaraadku iyo ardayda caalamiga ah. Sida jaamacadda flagship UAE, UAEU bixisaa kala duwan oo ay ka buuxaan la aqoonsan yahay, qalin iyo undergraduate barnaamijyo tayo sare leh iyada oo loo marayo sagaal Colleges: Ganacsiga iyo Dhaqaalaha; Waxbarasho; Engineering; Cuntada iyo Beeraha; Humanities iyo cilmiga bulshada; IT; Law; Medicine iyo Sayniska Caafimaadka; iyo Science. Iyada oo ah awood caalami ah distinguished, gobolka-of-the art campus cusub, oo kala duwan oo ay ka buuxaan adeegyada taageerada ardayga, UAEU bixiyaa jawi nool-barashada waa la ekaan ee Imaaraadka.
In ay drive si loo gaaro dherer cilmi caalamiga ah, UAEU la-hawlgalayaasheeda in industry shaqeeya si ay u bixiyaan xal cilmi in caqabadaha soo food by quruunta, gobolka, iyo dunida. University ayaa aasaasay xarumaha cilmi-baarista ee muhiimadda istiraatiiji ah in ay dalka iyo gobolka kuwaas oo horumarinta aqoonta goobaha muhiimka ah laga bilaabo khayraadka biyaha in daaweynta kansarka. UAEU ayaa hadda ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya cilmi ee GCC iyo World Carabta kaalinta, oo ka mid ah hogaanka 25% caalamka.
barnaamijyada tacliinta UAEU ayaa loo sameeyay iskaashiga shaqeeyayaasha, sidaas qalin waa in baahida sare. Qalinjabiyeyaasha UAEU qaban xilal muhiim ah in industry, ganacsiga, iyo dawladda gobolka oo dhan. maalgelinta Our sii goobaha, adeegyada, iyo shaqaalaha si loo hubiyo in UAEU sii wadi doonaan in ay u adeegaan sida nooc ka mid ah hal-abuurka iyo heer.
Sababaha inay doortaan United Arab Emirates University:
At UAEU waxaan diiradda on tayada waxbarashada ee arday kasta. UAEU ee "ajandaha heer sare" waxay ku lug leedahay qayb kasta oo jaamacadda. Halkan waxaad ka heli doontaa awood ugu fiicnaa ee dalka, technology ugu horumarsan ee gobolka iyo goobaha ugu casrisan iyo soo jiidasho campus in laga helo meel kasta oo. Arrinta aan diiradda saarno adag on heer sare hubisaa in aad shahaado si aad ah loo, labada qaran iyo caalami ah, iyo in aad ka tagi doono jaamacad si buuxda u qalabeysan guusha xirfadeed iyo qof ahaaneed.
2. Aqoonsiga Caalamiga ah
Iyada oo ku saleysan dul our sumcad caalami ah, shaqo ee ka qalin our, iyo wax soo saarka cilmi our, UAEU sii wadaan in ay ka mid yihiin ugu wanaagsan ee jaamacadaha dunida ee falan. QS, darajayn ah oo fadhigiisu yahay London ee caalamiga ah ee jaamacadaha dunida hoggaaminaysa, heerka UAEU sida lambarka mid ka mid ah, quruuntii iyo tirada 385 adduunka. QS sidoo kale waxaa ka mid ah UAEU on liiska ugu sareeya ee 50 jaamacadaha dunida la aasaasay ee la soo dhaafay gudahood 50 sano.
3. Shaqaalaysiin qalin our
Tan iyo barnaamijyadeenna ayaa loogu talagalay in la kaashanaya shaqeeyayaasha, qalin waxaa sare u doonatay labada hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo dawladda. barnaamijyada tacliinta Our kuma jiraan oo keliya aragtida fasalka, laakiin sidoo kale layliyo wax ku ool ah iyo waayo-aragnimada cilmi. qalin Our si joogto ah u hesho in gacan-ku ay waayo-aragnimo labadoodaba ku siinayaa xirfadaha wax ku ool ah in loo shaqeeyo qiimeeyaa oo la isku xirnaanta iyo xiriirada in ay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka mustaqbalkiisa-dhismaha.
4. A Deegaanka Taageero Learning
UAEU waxaa ka go'an in la siiyo taageero si loo hubiyo in arday kasta waxay noqon kartaa guul. Adeegyada Our taageerada waxaa ka mid ah la-talinta, daryeelka caafimaadka, taageero IT, taageerada naafada, adeegyada mustaqbalkiisa, gargaarka lacageed, adeegyada ardayga caalamiga ah, adeegyada Qalinjabiyeyaasha, xarunta guusha ardayga iyo golaha ardayga. Ayadoon caqabado ah in aad la kulanto jidka, mar walba waxaa jira mentor a, taliye, ama lataliye u dhow si ay u caawiyaan. Arday kasta waxaa la siiyaa la taliye waxbarasho oo u gaar ah si ay u caawiyaan la go'aanada muhiimka ah iyo doorashooyin in aad la kulmi wadada si tacliinta iyo shaqo guul.
5. A koraya Living Deegaanka
Hadafkayagu waa ma aha oo kaliya in ay ardayda siin ah shahaadada degree u fiican laakiin sidoo kale si loo hubiyo in aad leedahay maad jidka. ardayda Our ka badan iman 50 dalalka, si aad ula falgalaan doonaa iyo dadka dhaqamada kala duwan u bartaan. Jaamacadda waxay bixisaa badan oo hawlaha manhajka dheeraadka ah iyo waayo-aragnimada nolosha-qaadidda si loo kobciyo waayo-aragnimo aad jaamacad, iyo in ka badan 50 Clubs iyo Societies at UAEU, waxaa jira yaraanta lahayn fursado inaan ku baashaalo baxsan muxaadarooyin iyo in la sameeyo saaxiibo. campus UAEU waa bulshada dhab ah la qaxwada badan iyo maqaayado, tafaariiqda iyo bangiyada xarumaha, dhalaalaya, guryaha campus casri ah, iyo goobaha gaarka ah ciyaaraha iyo madadaalada.
6. A Campus New wayn
The campus cusub UAEU qoreysa naqshadaha ugu casri ah, goobaha xarumaha cilmi-baarista khaas ah, laayeen jarida kaabayaasha network IT, fasallada iyo shaybaarada in ciyaari qalabka ugu dambeeyay iyo technology waxbarashada si kor loogu qaado waxbarashada ardayga. Waxaa kaloo jira maktabad ballaaran bixiya khayraadka jirka iyo electronic badan, kooxaha caafimaadka ee fasalka laba dunida ku qalabaysan qalab taam ugu dambeeyey, laba barkadood oo dabaasha ah oo cabbirkooda Olympic, iyo sidoo kale tennis, basketball, iyo maxkamadaha badminton.
7. Goynta Edge-Research
UAEU waa jaamacadda cilmi Premier qaranka. Waxaan ma gudbiyaan aqoonta ardayda oo kaliya, laakiin iyada oo loo marayo kuliyadaha iyo xarumaha cilmi-baarista aynu caawiyo si ay u abuuraan aqoon cusub, shaqeeyaan horumarinta daaweynta cusub ee kansarka, soo saaro technology cusub ee wax looga qabanayo baahida adduunka ee tamarta iyo horumarinta tabaha cusub ee sii kordhaya sahayda cuntada caalamka. Sannad kasta taariikhyahanadu qadiimiga ah iyo our caawiyo in la ogaado oo la qiimeeyo artifacts taariikheed ku saabsan guulaha iyo dhaqanka dadka ka soo qayb this dunida. Sida ardayga UAEU, waxaad yeelan doontaa fursad ay ku shaqeeyaan dhinac awood cilmi-baaris caalami ah oo loo yaqaan on mashaariicdan oo xiiso leh.
Sida jaamacadda qaranka UAE ee, UAEU aqoonsan mas'uul ka ah jaamacadda iyo qalin our in ay gacan ka ladnaanta ee bulsha weynta. Waxaan dhiiri ardayda iyo shaqaalaha inay dib bulshada siin dhex qaybqaadashada bulshada,, adeegga dadweynaha, iyo cilmi baaris. Jaamacadda waxay ardayda ka caawisaa xiro ururada iskaa wax u qabso iyo adeegga bulshada ee degaanka ardayga gaar ah oo xiiso leh.
No jaamacadaha dalka bixisaa doorashooyin badan oo waxbarasho oo sida UAEU. dalabyo Jaamacadda 52 Barnaamijyada Bachelor degree ee, 37 Barnaamijyada Master ee, Doctor a of Medicine (MD), Doctor ah Farmashiyaha (Pharm.D), Barnaamijka Ph.D a, iyo Doctor ah Maamulka Business (DBA) guud ahaan kala duwan ee nidaamo, oo ay ku jiraan ganacsiga, dhaqaalaha, waxbarashada, injineernimada, cuntada iyo beeraha, insaaniyadda, ee cilmiga bulshada, IT, sharciga, daawo iyo caafimaadka cilmiga, iyo cilmiga dabiiciga ah. Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada degree waa mid gaar ah in UAEU, iyo dad badan oo iyaga ka mid ah waxaa la bixiyaa in isku gaar ah. Wax kasta oo danahaaga, talanti, oo gool, UAEU ayaa barnaamij u dhigma.
College of Food & Beeraha
College of Medicine & Sciences Caafimaadka
Ma rabtaa wada hadlaan United Arab Emirates University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: United Arab Emirates University rasmiga ah Facebook
dib u eegista United Arab Emirates University
Ku biir si ay ugala hadlaan of United Arab Emirates University.